DEG DEG Kadib 12 Maalmood oo ay sharci darro ku xirnayd Idaacadda Daljir oo maanta lafasaxay. – Radio Daljir
DEG DEG Kadib 12 Maalmood oo ay sharci darro ku xirnayd Idaacadda Daljir oo maanta lafasaxay.
Luulyo 4, 2016 8:12 b 0
(July 04 2016)-War qoraal ah oo soo gaarey xafiisyada Idaacadda Daljir kana yimid wasaaradda warfaafinta dowladda Puntland ayaa lagu cadeeyey in lafasaxay Radio Daljir oo xanibnaa mudo 12 maalmood ah.
Warka qoraalka ah oo uu ku saxiixnaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Puntland Maxamuud Xasan Soocadde, ayaa waxaa lagu cadeeyey in idaacadda lagu siidaayey cafis madaxweyne.
DHEGEYSO-Boqor Cabdullaahi Dabagooye oo soodhoweeyey siidaynta Idaacadda Daljir.
DHEGEYSO-Xildhibaan Shaacuur oo kahadlay Isbedelka maamul ee gobolka Mudug iyo Xariga Daljir.